Home » Fiarovan-tena amin'ny loza sy loza » Nidina ny sidina: nanapoaka ny seranam-piaramanidina Berlin-Schoenefeld ny baomba WWII
Ny baomba WWII dia nanidy ny seranam-piaramanidina Berlin-Schoenefeld
Ny kaonty Twitter ofisialin'ny Seranam-piaramanidina seranam-piaramanidina Berlin androany dia nanambara fa ny asan'ny sidina nataon'i Schoenefeld dia "notapahan'ny baomba", saingy tsy nanome antsipiriany bebe kokoa.
Raha ny fahitàna azy, Seranam-piaramanidina Berlin-Schoenefeld nampiato ny asany ary navily lalana ny sidina tonga taorian'ny nahitana baomba WWII nandritra ny asa fanamboarana tao amin'ny hub air.
Ny mpitondra tenin'ny seranam-piaramanidina dia nilaza fa teo an-toerana ny manampahefana mba hamaritana ny fomba tsara indrindra hialana amin'ilay miaramila efa am-polony taona lasa izay. Ny fiainganana sy ny fahatongavan'i Schoenefeld dia voalaza fa najanona, ary ny sidina natokana ho any an-tanety dia navily lalana tany amin'ny seranam-piaramanidina hafa.
Ny seranam-piaramanidina Schoenefeld dia 18km (11 miles) atsimoatsinanan'ny renivohitra Alemanina. Mpandeha efa ho 13 tapitrisa no nandalo ny tobin'ny rivotra tamin'ny taona 2017, raha ny angom-baovao voaray.